चाणक्यका ५ नीति ख्याल राखे जीवनमा १ रुपैया पनि घाटा हुन्न ! - Asian Samachar
चाणक्यका ५ नीति ख्याल राखे जीवनमा १ रुपैया पनि घाटा हुन्न !
Asian Samachar आइतवार, पुस १०, २०७३ (11 months ago) बिचित्र
चाणक्य प्राचीन समयका एक महान दार्श्निक तथा सम्राट चन्द्रगुप्तका सल्लाहकार थिए। उनले अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र आदिका महान ग्रन्थहरू रचना गरेका थिए। उनले जीवनमा जो अनुभव प्राप्त गरे, जुन नियम बनाए ती आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । उनी कुटिल रणनीतिकार समेत थिए ।
चन्द्रगुप्त जस्ता एक सामान्य बालकलाई उनले भारतको सम्राट नै बनाईदिए । चाणक्यले अर्थशास्त्रदेखि राजनीति, कुटनिति र जनजीविकाबारे धेरै नीति तयार पारेका छन्। जीवनमा सफलता वा असफलता, लाभ वा हानी, सुख वा दुःख आऊँछन् जान्छन्।
चाणक्यले यस्ता कुरा बताएका छन्, व्यक्तिले जीवनमा कहिले हानी वा नोक्सानको सामना गर्नु पर्दैन् । उनका यी नीतिहरुलाई लागु गर्ने हो भने मानिस जस्तासुकै नोक्सानबाट बच्न् सक्छ। चाणक्यका ६ नीति ख्याल राख्दा जीवनमा १ रुपैया पनि घाटा हुन्न ।
१. समयको पहिचान
जोसुकै समझदार मानिसले जान्दछ हाल कस्तो समय चलिरहेको छ। सुख दिन छन कि दुःखमा जिन्दगी चलिरहेको छ ? यस्कै आधारमा काम गर्नु पर्छ। दुःखका बेला धैर्यता नगुमाउनु र समझदारीका साथ अगाडी बढ्नु र सुखमा बेलामा लापरवाही गर्नु हुँदैन् ।
२. मित्र र शत्रुको पहिचान
मानिसले आफ्ना मित्र र शत्रु चिन्न सक्नु पर्छ। हामीले सच्चा मित्र र शत्रु चिन्यौ भने हानीबाट बच्न सकिन्छ ।जीवनमा मित्रका भेषमा शत्रु पनि आउँछन्। यिनीहरुबाट बच्न पर्छ। शुत्रलाइ चिनेर उनिहरुबाट सधै बच्नुमा भलाइ छ।
मानिसलाई आफू बसेको स्थानका बारेमा जानकारी हुनु पर्छ।त्यहाँको वातावरण र परिस्थितिले धेरै कुरा तय गर्छन्। यदी खराव मानिस बस्दछन् भने सावधान रहनुपर्छ भने वातावरण स्वास्थ अनकुल छैन् भने त्यसबाट बच्न पहिलै प्रवन्ध गर्नु पर्छ ।
४. आय र व्ययको जानकारी
मानिसलाइ आफ्नो आय व्यय अर्थात कमाइ र खर्चको जानकारी हुनु पर्छ। आफ्नै कमाई अनुसार खर्च गर्ने हो । आफ्नो आर्थिक तागत बमोजित योजना गर्नुपर्छ।
५. आफ्नै पहिचान
मानिसलाई आफ्नो योग्यता र कुशलता थाहा हुनु पर्छ। योग्यताले नभ्याउने काम गर्नुहुन्न । आफूलाई सुहाउने र क्षमता पुग्ने कार्य गर्दा सफलता हासिल हुन्छ ।